Kubvunzana naDolores Redondo, anokunda iyo Planeta Mubairo 2016 | Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Hurukuro, Literature
Dolores Redondo, anokunda iyo 2016 Planeta Mubairo. © La Portada Mex.
Mushure mekutengesa anopfuura mazana manomwe zviuru zvemakopi ake Baztán trilogy, Dolores Redondo (San Sebastián, 1969) anotsiva matriarchies emadzitateguru, Navarra yeGalicia uye mashiripiti anozivikanwa kune mamwe akazara matabo kubva kunyika dzeGalician. Iyo 2016 Planeta Prize inohwina novel inodaidzwa kuti Izvi zvese ini ndichakupa uye mutambo nezve "kusarangwa uye makaro", mumashoko aRedondo pachake.
Dolores Redondo: "MuGalicia mune nzvimbo dzinoverengeka dzinoenda vanhu kuti vabvise dhiabhori"
Dolores Redondo anofamba achipfuura neChinyorwa Chekutsikirira cheFairmont Juan Carlos I hotera muBarcelona achifara akaneta, negirazi reCoca Cola iro raanoedza kudzikisira kushomeka kwekurara uye kupenya kwefuro raakakandirwa kwemaawa gumi nemana. .
Zvinoenderana nemashoko ake kumusangano wevatori venhau, Zvese izvi zvandichakupa, iro basa rakavharwa pasi pezita rekunyepedzera Sol de Tebas uye anokunda iyo 2016 Planeta Prize, inyaya yematsotsi nezvekusarangwa uye makaro akaiswa munzvimbo dzisinganzwisisike dzeGalician Ribeira Sacra. Nhau inotanga nekuzivikanwa muLugo wechitunha chavlvaro nemurume wake, Manuel, uyo anotanga kuwana zvishoma nezvishoma hupenyu huviri hweumwe wake nekuda kwerubatsiro rwemupristi nemurindi wehurumende.
Mabhuku Nhau: Iwe unonzwa sei?
Dolores Redondo: (anoseka) ini handizive, weird, ndinofara. Ini ndichine kunzwa kwekusati ndasvika kuti ndinoda nguva yekuvanzika uye kusurukirwa kuti ndiongorore zvese zvakaitika kwandiri.
KU: Uye zorora. . .
DR: Hongu, asi zvinopfuura kuzorora kuti uti "izvi zvaitika." Nekuti zvichiri kuitika.
KU: Zvichida kana nguva ichipfuura uye uchirangarira zuva iri haugone kuzviita zvakajeka.
DR: (Anoseka) Chaizvo!
KU: Ndiudze nezve Zvese izvi zvandichakupa: zvakasiyana sei nezvose zvawakanyora kare?
DR: Pakutanga, ini handichisiri iye munhu akanyora mamwe emanoveli. Ose akave nemimba kubva kune akasiyana maonero, emumwe munhu anga asina hunyanzvi kuzvipira kunyora, zvirinani na Muchengeti asingaoneki. Zviripachena kuti mabasa aya aifanira kusiya chisaririra chinoonekwa nemuverengi. Ikozve kune zvakare kuziva kwekuita kuita zvakasiyana zvinhu. Maitiro ekutanga, ari pachena, anogara muchokwadi chekuti mu Baztán trilogy vakadzi uye nzanga yemadzitateguru yakatonga, zvisinei panguva ino ndakaenda kune kumwe kunyanyisa, kune rimwe divi renyika, kune imwe nzvimbo ine tsika dzakasiyana nemararamiro; hutongi hwemhuri hwese hwakakanganiswa zvakanyanya neKaturike.
KU: Muchokwadi, ivo protagonists venyaya iyi varume.
DR: Ehe, ivo vatatu varume vakasiyana vakatarisana zvachose, vakabatanidzwa nekutsvaga kwakajairika kwechokwadi. Hushamwari hushoma huri kubuda zvishoma nezvishoma kusvika hwatovamanikidza kuzvipira kunovakurudzira kuti varambe vari pamwe chete mukutsvaga chokwadi.
KU: Wataura kuti mamiriro, mune ino kesi iyo Galician Ribeira Sacra, yaive yakakosha kukosha, kuve mumwezve hunhu. Ndeipi yave iri nzvimbo inokurudzira kwazvo iwe mune iyo jogirafi?
DR: Ini ndinoda chaizvo nzvimbo inonzi Bhelesar, chiteshi cherwizi pane rwizi rweSil. Ini ndinoda kufamba rwizi neigwa ndichifunga nezve ese minda yemizambiringa inosvika kumahombekombe. Inoshamisa, inokurudzira. Ziva zviripo, kuti pasi pemvura pane misha minomwe yakanyudzwa uye vanhu vaifanira kuenda kumusoro.
KU: Sezvazviri muBaztán trilogy, kuchine mashiripiti, asi mune izvi zvakasiyana.
DR: Hongu.Sezvo naBaztán, muNavarra, ndakaona zvinonakidza kutaura nezvezvimwe zvemashiripiti nekuti ndaifunga kuti dzaive dzichirasika uye ndainge ndangoudzwa kubva kune anthropological maonero. Iko kushandiswa kwezuva nezuva kwengano idzi kwaive kurasika.
Nekudaro, kuGalicia mhedzisiro yacho inopesana, nekuti Galicia inogara yakabatana zvakanyanya nemamega, nevarapi, kune ese matopiki andatiza uye andakafunga kusaasanganisira. Ribeira Sacra ine yakanyanya kusangana machechi, convents uye Romanesque art muEurope yose. Katurike uye nemararamire anogara vanhu munzvimbo iyi zvine hukama hwakasiyana pakati peChechi yeKatorike nevanhu, uye kune mamwe maitiro asingaitike kumwe kunhu munyika uye achakachengetedzwa. Kusiyana nemashiripiti eBaztán, iyi inotyisa uye inokatyamadza. Izvi ndizvo zvitendero zvinova chikamu chekutenda nekutenda kwemazuva ese. Munzvimbo dzinoverengeka muGalicia kune nzvimbo dzinoverengeka uye mumwe wevapristi venyaya iri mune imwe yacho. Vanhu vanoenda kwaari kuti vabvise dhiabhori. Ini ndiripo, izvo zviripo uye zvinoitwa zuva nezuva. Vanhu vanouya pavanofungidzira kuti vakatambura kurwadziswa pamweya uye kune mupristi uyo, asina kana mhosva, anobvuma kuvaporesa. Handizive kuti mupristi wechechi yangu angatii kana ndichizomukumbira kuti abvise dhiabhori kwandiri (achiseka). Asi zviripo, zvakajairika, uye chikamu chehupenyu hwezuva nezuva. Haikwanise kunzi mashiripiti, kungave kusaremekedza, inzira inokatyamadza yekurarama kutenda iyo inosiya rima kumahombekombe erima kuitira kuti zvinhu zviitike izvo zvingave zvisina tsananguro inonzwisisika.
KU: Icho chirevo.
KU: Uye iwe hauzive chekutsanangura.
DR: Chaizvoizvo, iwe unotsanangura chii ipapo? Iwe unofanirwa kubvuma neruremekedzo kuti kune vanhu vanoenda uye kuti zvinhu izvi zvinoitika zvakajairika.
Río Sil, nzvimbo yakafemera Zvese izvi ini ndichakupa, naDolores Redondo.
KU: Ndeapi mazano aungapa kune chero munhu angade kunyorera iyo Planeta Mubairo?
DR: Ini ndinokuraira iwe kuti usaite seni ini kekutanga uye kumirira kusvikira iwe uine bhuku riri nani. Iwe unogara uchifanira kuenda neruzivo irinani. Kunyanya kana kekutanga iwe kunyora, tenda kwandiri, unogona kunyora chimwe chinhu chiri nani. Nekungonyorazve chete ndipo pawaizoona mutsauko nekuti iwe watodzidza, watonyora novel. Funga kuti munyika yekutsikisa, kunyangwe tichiwana kuti zvinhu zvinodzokororwa gare gare, kana izvo zvaunoda chaizvo kubudirira kukuru unofanirwa kutsvaga zvitsva, vanogara vachitsvaga zvakasiyana. Kana iwe ukagadzirisa kuva kopi kana kudzokorora clichés, hausi kuzosvika kure uye panowanzove nemukana mumwe chete wekutanga kuratidza. Kana iwe uine rovhesiti iwe uchibvuma kuti iwe unogona kuita zvirinani, usazvipe izvozvi.
KU: Uri kuitei nemubairo?
DR: Hafu yeMontoro, hongu (anoseka). Uyezve, sevanhu vazhinji munyika ino, ndine vabereki vaviri vakwegura vanogara papenheni shoma uye hama mbiri dzisingashande. . . Ndiri hanzvadzi yakura, saka kubatsira kunze kwakajairika kwandiri (kuseka).
Zvese izvi zvandichapa, naDolores Redondo rave riri basa rinokunda rePlaneta Prize 2016 uye tinotarisira kuzokwanisa kuiverenga muActualidad Literatura mukati memavhiki anotevera.
Wakaverenga here basa raRedondo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Kubvunzana naDolores Redondo, anokunda iyo 2016 Planeta Mubairo